Macallin satelite u adeegsanaya tababarka kooxdiisa!! – Gool FM
Macallin satelite u adeegsanaya tababarka kooxdiisa!!
Raage July 30, 2017
(Napoli) 30 Luulyo 2017 – Macallin Maurizio Sarri ayaa hal abuurka tiknolojiyadeed weji cusub u yeelay kaddib markii uu dabaqay hannaan uu satelite ugu adeegsanayo tababarrada ay sameeyso kooxda Napoli.
Macallinkii hore ee Empoli ayaa horayba u ahaa macallinkii ugu horreeyay ee daroon dul hoganaya garoonka u isticmaala tababarka kooxda si uu u duubo dhaqdhaqaaqyada iyo guuritaanka xeeladeed ee laacibiinta.
Iminka, sida ku dhigan Il Mattino, Sarri ayaa markan adeegsanaya satellite si uu u helo sawir ka faahfaahsan kana ballaaran midkii hore, iyadoo macallinkan loo magacaabay tababaraha sanadkii 2016-17 ee Serie A.
Napoli oo magacoowday laacibiinta uga qayb geleysa Audi Cup
TOOS u daawo: AS Roma vs Juventus - LIVE (Shaxda sugan)